OnePlus 7T Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar | Androidsis
Toddobaadyadan ayaa bilaabmaya hel wararkii ugu horreeyay ee ku saabsan OnePlus 7T Pro, midka noqon doona dhamaadka-xiga ee soo socda ee sumadda Shiinaha. Waqtigan la joogo wax yar ayaan ka ognahay taleefankan calaamadda ah, in kasta oo ay haddaba u muuqato inay jirto taariikh rasmi ah oo lagu soo bandhigayo, sida ay sheegtay warbaahinta kala duwan ee hore u shaacisay. Sidii caadiga ahayd, waxay imaan lahayd deyrta.
Astaamaha Shiinaha badanaa waxay soo bandhigaan noocyadooda labaad ee dhammaadka-dheer dayrta, wax u muuqda in sanadkan lagu soo celinayo. Marka dhowr bilood gudahood waxaan si rasmi ah u ogaan karnaa barnaamijkan OnePlus 7T Pro. Heer sare oo cusub oo loogu talagalay nooca Shiinaha.
Oktoobar 15 waxay umuuqataa inay tahay taariikhda ay doorteen astaanta. Taariikhdaan OnePlus 7T Pro ayaa si rasmi ah loo ogaan doonaa. Waa xanta, hadda, taas oo noo sheegaysa in sanadkan uu noqon doono soo bandhig waxyar ka horreeya sidii caadiga ahayd. Maaddaama summaddu badanaa naga tagto taleefannadan dhammaadka Oktoobar ama horraantii Nofeembar.
Sidaa darteed waxaa jira isbeddel weyn oo ku saabsan arrintan oo ku saabsan astaanta Shiinaha. Runtii ma ogin sababta kaas oo sanadkaan soo bandhigida loo qabanayo sidii caadiga ahayd. In kasta oo ay tahay in maskaxda lagu hayo in tani ay tahay xan, taas oo macnaheedu uusan ahayn in tani ay tahay taariikhda ugu dambeysa.
Sidaa darteed, waxaan sugi doonaa inaan xog cusub ka helno wax yar uun astaanta. OnePlus 7T Pro wuxuu ballan qaadayaa inuu noqdo taleefan weyn, kaas oo sida ay sheegayaan wararka xanta ah qaarkood wuxuu noqon karaa kii ugu horreeyay ee sumadda leh 5G. In kasta oo ilaa iyo hadda aysan jirin wax xaqiijin ah oo ku saabsan wararkaas xanta ah ee la xiriira aaladda.
Waxaan dheg u noqon doonnaa faahfaahinta cusub ee ku saabsan OnePlus 7T Pro. Nooca Shiinaha ma uusan xaqiijin wax illaa iyo hadda, laakiin waxay u muuqataa in dhowr bilood gudahood aan awoodi doonno inaan si rasmi ah u ogaanno. Xaqiiqdii toddobaadyadan soo socda waxay ka sii deyn doonaan faahfaahin badan oo dheeraad ah oo ku saabsan dhammaadka-dhammaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 7T Pro wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid
Huawei si ay u bilawdo taleefan LCD ah oo leh shaashad shaashad shaashadda hoosteeda